Puntland oo taageero u muujisay Ra’iisul Wasaare Rooble - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Puntland oo taageero u muujisay Ra’iisul Wasaare Rooble
Puntland oo taageero u muujisay Ra’iisul Wasaare Rooble
Maamulka Puntland ayaa hadlay Go’aankii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta uu Shaqada uga joojiyay Agaasimihii Hay’adda NISA iyo kiiska Ikraan Tahliil oo aheyd Gabar ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Nabadsugida Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu bogaadiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta doorkiisa hoggaamineed ee Dalka, gaar ahaan waajibaadka amniga Qaranka, hirgelinta doorashada iyo hogaaminta Golaha Wadatashiga Qaranka.
Sidoo kale Puntland ayaa waxay kaloo boggaadisay, soona dhaweysay dadaalka Ra’iisul Wasaarahu ugu jiro sidii looga gun gaari lahaa xaaladda Kiiska Ikraan Tahliil iyo in qoyska Ikraan iyo dhammaan Ummadda Soomaaliyeed su ay u helaan xaqooda Dastuuriga ah.
” Puntland waxay soo dhaweynaysaa go’aanka Ra’iisul Wasaarahu shaqada kaga joojiyey Agaasimihii Hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya, tillaabadaas oo ah mid waafaqsan Dastuurka Dalka,waxaay kaloo ugu baaqeeysa dhammaan inta ay quseyso in la illaaliyo xasiloonida, midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya, lana dhawro ku dhaqanka Dastuurka ku meel gaarka ah ayaa lagu yiri” Qoraalka kasoo baxay Puntland.
Waa Maamul Goboleedkii labaad ee taageera dadaalka Ra’iisul Wasaaraha ee cadaalad u raadinta Kiiska Ikraan Tahliil, waxaana billaabay Maamulka Jubbaland, iyada oo weli aysan ka hadlin Maamulada, Hir- Shabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Previous articleidaacadda subaxnimo ee wardeeq
Next articleHowlgal ka socda Beledweyne kadib weerar ka dhacay